स्पण्डज: टोलीहरूको लागि सहयोगी सामग्री क्युरेसन | Martech Zone
स्पन्डज यसले उत्तम जानकारी ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँदछ, ज्ञान डिस्टिल, सम्मोहक विचारहरू सिर्जना गर्दछ, र प्रभावशाली सामग्री सिर्जना गर्दछ। तिनीहरूसँग एक निःशुल्क संस्करण र तिनीहरूको प्लेटफर्मको एक पेशेवर संस्करण दुबै छ। स्पण्ड प्रो एक सामग्री प्लेटफर्म हो जुन टोली र व्यक्तिहरूलाई सक्रिय, प्रभावशाली सामग्री पत्ता लगाउन, क्युरेट गर्न, सिर्जना गर्न र वितरण गर्न सक्षम गर्दछ।
स्पान्डले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ:
ट्रैक - उत्कृष्ट सामग्रीको ट्र्याक राख्नुहोस्, नोटबुकमा विषयहरू, घटनाहरू, व्यक्तिहरू वा तपाईंको आवश्यकताहरू मिल्दो कुनै संरचना द्वारा राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुहोस्। स्पन्डज ब्राउजर विस्तारले तपाईलाई अनलाइन पत्ता लगाएका सन्दर्भहरूको लागि उत्तम नोटबुक पनि सुझाव दिनेछ।
फिल्टर - सबै स्रोतहरू Spundge नोटबुक भित्र प्रासंगिक सामग्री को एकल वास्तविक समय फिल्टर स्ट्रीम को रूप मा एक साथ आउँछ। यो एकचोटि प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कति समय यसले बचत गर्छ।
सहयोग गर्नुहोस् - स्पन्डज नोटबुकहरू सामाजिक र सहयोगी हुन्, तपाईंलाई साझा रुचिहरूको साथ योगदानकर्ताहरूबाट र यसबाट सिक्नको लागि। अनुयायीहरू र योगदानकर्ताहरूले समूह द्वारा क्युरेट गरिएको सामग्रीको फर्म्याट गरिएको डाइजेस्ट प्राप्त गर्दछ, सबैलाई समक्रमणमा राख्दै।
सिर्जनाकर्ताहरू, प्रकाशकहरू र मार्केटरहरू निम्न डिजाइनहरू र उनीहरूको व्यावसायिक संस्करणका फाइदाहरूका साथ दिमागमा डिजाइन गरिएको अन्त-टु-अन्त समाधानको फाइदाहरू बुझ्नुहोस्:
सुधारिएको सहयोग - स्पन्डज प्रो प्रयोगकर्ताहरू कथाहरू र नोटबुकमा सहकार्य गर्न सँगै काम गर्न सक्दछन्। यसले तपाईंलाई ड्राफ्ट सजिलैसँग व्यापार गर्न, टिप्पणीहरू राख्न र सम्पादनहरू सम्मिलित गर्न, संशोधनहरू अवलोकन गर्न र प्रगति ट्र्याक गर्न सक्षम गर्दछ।
व्यावसायिक सामग्री स्रोतहरू - स्पन्ज प्रो प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै र सामग्री फायरहोसहरूको सूचीबाट फाइदा लिन्छ जो विशेष गरी पेशेवरहरूको लागि निर्मित छ। तपाईका लेखका लागि सही फोटो खोज्नुहोस् वा केहि लेखहरूमा पुनः प्रकाशित गर्न उत्तम लेख, र सबै विस्तृत कार्यप्रवाह भित्र।
गोपनीयता - तपाइँको सबै अनुसन्धान र सामग्री एक एकल, सुरक्षित र सुविधाजनक ठाउँमा राख्नुहोस्। तपाईंको स्पन्डज प्रो नोटबुक र कथाहरूले सहयोगीहरूको सुरक्षित पहुँचका लागि निजी बनाउँदछ, वा तपाईंको आँखा मात्र।
सामाग्री रचना - स्पन्डज प्रो ले तपाईंलाई सामग्री सम्पादक दिन्छ जसले तपाईंलाई द्रुत रूपमा ड्र्याग र ड्रप गर्न अनुमति दिन्छ बचत गरिएको ट्वीटहरू, छविहरू, ध्वनी क्लिपहरू, अन्तर्क्रियात्मक प्रस्तुतीकरणहरू र भिडियोहरू तपाईंको कहानीमा। यसले द्रुत, सुरक्षित लिंकहरूमा सहज पहुँच र नोटबुकमा अनुसन्धान प्रदान गर्दछ जब तपाईं लेख्नुहुन्छ।
स्मार्ट विशेषता - स्पन्डज स्वचालित रूपमा एट्रिब्युसन थप गर्दछ जब तपाईं प्रतिलिपि बनाउँनुहुन्छ वा नोटबुकबाट आईटमहरू ड्र्याग वा ड्रप गर्नुहुन्छ। यसले यूआरएलहरू पूर्व लोड गर्दछ जब तपाईं बाह्य सामग्रीमा लिंक गर्नुहुन्छ। स्पन्डज कुशल, नैतिक, र netiquette मैत्री छ।
ब्लास्ट सिंडिकेशन - स्पान्डमा लेख्नुहोस्, कहिँ पनि प्रकाशित गर्नुहोस्। स्पण्डजमा लेखिएका कथाहरू तत्काल CMS मा प्रकाशित गर्न सिन्डिकेट गर्न सकिन्छ जस्तै WordPress, वा MailChimp मार्फत ईमेल न्यूजलेटरको रूपमा। तपाईं ड्राफ्ट र एकै समयमा ट्वीटहरू र फेसबुक अपडेटहरू अनुसूची गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि लेख्नुहोस्, त्यसपछि सिन्डिकेट सामग्री जहाँ यो जान आवश्यक छ।
इम्बेडिंग र एनालिटिक्स - स्पन्डज कथाहरू कुनै पनि वेबसाइटमा इम्बेड गर्न सकिन्छ। यसले सामग्री साझा गर्न र प्रकाशित गर्न अझै अर्को विकल्प प्रदान गर्दछ। गुगल एनालिटिक्सको लागि निर्मित समर्थनले तपाईंलाई तपाईंको सामग्री ट्र्याक गर्न दिन्छ।
अद्यावधिक धक्का - प्रो प्रयोगकर्ताहरूले इम्बेडेड नोटबुक र कथाहरूको द्रुत अपडेटहरूबाट फाइदा लिन्छन्। परिवर्तनहरू वास्तविक समयमा धकेल्छन् जहाँसुकै तपाईंको सामग्री सम्मिलित छ।
अनुकूलन स्रोतहरू - एक निजी सामग्री फीड छ वा एपीआई तपाईं नोटबुक सक्षम गर्न चाहनुहुन्छ? स्पन्ज प्रो प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै अनुकूलन जानकारी स्रोतहरू थप्न सक्दछन्। यसले तपाईंको टीमलाई तारहरू स्क्यान गर्न, आन्तरिक अभिलेखहरू जाँच्न र फोटो डाटाबेसहरूमा पहुँच गर्न अझ सक्षम तरीकाले सुसज्जित गर्दछ। हामी तपाईंलाई कुनै पनि समय मा सेट अप गर्न मद्दत गर्नेछौं।
पुनश्च: भिडियो मा विशाल कछुए के साथ छ?
टैग: विशेषणसामग्री एनालिटिक्ससामग्री सहयोगसामग्री क्यामेरासामग्री इम्बेडिंगसामग्री फिल्टरिंगसामग्री स्रोतहरूसामग्री सिन्डिकेशनसामग्री ट्र्याकिंगअपडेट अपडेट गर्नुहोस्स्पन्जसमर्थक spundge
वाणिज्य मा सामाजिक मिडिया प्रभाव